Abey Axmed: Aniga ayaa hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah Tigreega. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Abey Axmed: Aniga ayaa hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah Tigreega.
Last updated Nov 23, 2021 175 0
Abey Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka wuxuu ku sheegay in maanta oo Talaado ah uu aadi doono furimaha hore ee dagaalka, si uu u hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah jabhadda TPFL ee dooneysa iney talada dalka gacanta ku dhigto.
Abey Axmed wuxuu sheegay in loo baahanyahay in la difaaco dalka Itoobiya oo uu sheegay inuu halis wajahayo, wuxuuna ugu baaqey shacabka wadankaas iney hubka qaadaan, furimaha horena soo buuxiyaan.
” Laga billaabo Talaadada, waxaan aadayaa furimaha hore ee dagaalka, si aan u hogaamiyo ciidankeena” ayuu ku yiri Abey Axmed qoraal uu soo dhigay barta Twitterka.
Wuxuu hadalkiisa intaa sii raaciyay, isagoo shacabka Itoobiya ku dhiiragelinaya iney ka qeybgalaan dagaalka ” kuwa doonaya iney kamid ahaadaan shacabka Itoobiya, Taariikhduna ay albaabadeeda u furto, maanta difaaca wadanka, waxaad nagula kulmi doontaan furimaha hore”.
Hadalka kasoo baxay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed wuxuu kusoo aadayaa iyadoo weli dagaallo culus dhexmarayaan ciidamada federaalka iyo jabhadaha kasoo horjeeda Abey Axmed oo ay ugu tun weynyihiin Tigreega iyo Oromada, magaalada Adis Ababana ay ka taagantahay xaalad jahwareer ah, maadaama dagaalladu ay kusoo siqayaan.
Dagaalka dhexmaraya dowladda Itoobiya iyo qowmiyadaha diidan sida Tigreega ayaa billowday bishii Novembar ee sanadkii 2020-ka, waxaana tirakoobyo la sameeyay lagu sheegay iney ku dhinteen kumanan kun oo dhinacyada dagaallamaya ah iyo dadka shacabka ah, halka malaayiin kalena ay ka barakaceen guryahooda, oo ay ku dac dareysanyihiin wadamada deriska sida Suudaan.